Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Joshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Solomọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsi 1 Ndị Tesalonaịka 2 Ndị Tesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Ọ bụ Jehova nwe oké ọ bụla e bu ụzọ mụọ (1, 2)
Ememme Achịcha Na-ekoghị Eko (3-10)
A ga-ewepụtara Chineke oké ọ bụla e bu ụzọ mụọ (11-16)
E du ndị Izrel gawa n’ụzọ Oké Osimiri Uhie (17-20)
Ogidi ígwé ojii na ogidi ọkụ (21, 22)
13 Jehova gwakwara Mosis, sị: 2 “Dooro m nwoke ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’Izrel nsọ.* Ọ bụ m nwe nwoke ọ bụla e bu ụzọ mụọ na anụmanụ ọ bụla bụ́ oké e bu ụzọ mụọ.”+ 3 Mosis wee gwa ndị Izrel, sị: “Na-echetanụ ụbọchị a unu si n’Ijipt bụ́ ebe unu nọ na-agba ohu* pụta,+ n’ihi na Jehova ji aka ya dị ike si ebe a kpọpụta unu.+ N’ihi ya, unu erila ihe ọ bụla e tinyere ihe na-eko achịcha. 4 Unu na-apụ taa, n’ọnwa Ebib.*+ 5 Mgbe Jehova ga-akpọbata unu n’ala ndị Kenan, ndị Het, ndị Amọraịt, ndị Haịvaịt, na ndị Jebus,+ nke ọ ṅụụrụ nna nna unu hà iyi na ọ ga-enye unu,+ bụ́ ala mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ na-eru na ya,*+ unu ga-eme ememme a n’ọnwa a. 6 Ị ga-eri achịcha na-ekoghị eko ruo ụbọchị asaa.+ N’ụbọchị nke asaa, a ga-emere Jehova ememme. 7 Ị ga-eri achịcha na-ekoghị eko n’ụbọchị asaa ahụ.+ A gaghị ahụ ihe ọ bụla e tinyere ihe na-eko achịcha n’aka gị,+ a gaghịkwa ahụ ihe na-eko achịcha n’ebe niile unu bi. 8 Ị ga-agwakwa nwa gị n’ụbọchị ahụ, sị, ‘M na-eme ihe a n’ihi ihe Jehova meere m mgbe m si n’Ijipt pụta.’+ 9 Ihe a ga-abụrụ gị ihe àmà n’aka gị nakwa ihe ncheta n’egedege ihu gị,*+ ka iwu Jehova wee dịrị n’ọnụ gị, n’ihi na Jehova ji aka ya dị ike kpọpụta gị n’Ijipt. 10 Kwa afọ, ị ga na-edebe iwu a n’oge ya a kara aka.+ 11 “Mgbe Jehova kpọbatara gị n’ala ndị Kenan, nke ọ ṅụụrụ gị na nna nna gị hà iyi na ọ ga-enye gị,+ 12 ị ga-ewepụtara Jehova nwoke ọ bụla e bu ụzọ mụọ* iche nakwa anụmanụ ọ bụla bụ́ oké nke anụ ụlọ i nwetara bu ụzọ mụọ. Ọ bụ Jehova nwe ha.+ 13 Ị ga-eji atụrụ gbara jakị ọ bụla e bu ụzọ mụọ. Ma ọ bụrụ na ị gbaraghị ya, ị ga-akụji ya olu. Ị ga-agbarakwa nwa nwoke ọ bụla i bu ụzọ mụọ n’ụmụ gị ndị nwoke.+ 14 “Ọ bụrụ na nwa gị emechaa jụọ gị, sị, ‘Gịnị ka ihe a pụtara?’ ị ga-asị ya, ‘Jehova ji aka ya dị ike kpọpụta anyị n’Ijipt, n’ebe anyị nọ na-agba ohu.*+ 15 Mgbe Fero siri ọnwụ na ya agaghị ahapụ anyị ka anyị gawa,+ Jehova gburu nwa ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’Ijipt, malite na nwa mbụ mmadụ mụrụ ruo na nwa mbụ anụmanụ mụrụ.+ Ọ bụ ya mere m ji achụrụ Jehova oké ọ bụla e bu ụzọ mụọ* n’àjà, na-agbarakwa nwa nwoke ọ bụla e bu ụzọ mụọ n’ụmụ m ndị nwoke.’ 16 Ihe a ga-abụrụ gị ihe àmà n’aka gị nakwa ihe ị ga-ekegide n’egedege ihu gị,*+ n’ihi na Jehova ji aka ya dị ike kpọpụta anyị n’Ijipt.” 17 Mgbe Fero hapụrụ ndị Izrel ka ha gawa, Chineke edughị ha gaa n’ụzọ gawara n’ala ndị Filistia, n’agbanyeghị na ọ dị nso. N’ihi na Chineke sịrị: “Ọ bụrụ na a lụso ha agha, ha nwere ike ịgbanwe obi ha ma laghachi Ijipt.” 18 N’ihi ya, Chineke mere ka ndị Izrel si n’ụzọ ala ịkpa nke Oké Osimiri Uhie gaa gburugburu.+ Ma ndị Izrel haziri onwe ha ka ndị agha mgbe ha si n’Ijipt na-apụ. 19 Mosis chịkwaara ọkpụkpụ Josef n’ihi na Josef mere ka ndị Izrel ṅụọrọ ya iyi. Josef sịrị: “O doro anya na Chineke ga-agbatara unu ọsọ enyemaka, chịrịkwanụ ọkpụkpụ m pụọ n’ebe a.”+ 20 Ha si na Sọkọt pụọ, maa ụlọikwuu n’Itam, n’ebe ala ịkpa ahụ jedebere. 21 Jehova ji ogidi ígwé ojii na-ebutere ha ụzọ n’ehihie,+ jirikwa ogidi ọkụ na-ebutere ha ụzọ n’abalị. O ji ogidi ndị a na-edu ha ka ha nwee ike ịna-aga ma n’ehihie ma n’abalị.+ 22 Ogidi ígwé ojii ahụ anaghị esi n’ihu ha apụ n’ehihie, ogidi ọkụ ahụ anaghịkwa apụ n’abalị.+
^ Na Hibru, “Wepụtara m nwa mbụ ọ bụla meghere akpa nwa n’Izrel.”
^ Na Hibru, “onye ọ bụla meghere akpa nwa.”